काठमाडौं ।परिधी मिडियाको गौरवमय प्रस्तुति सामाजिक विषयबस्तु समेटिएको टेलि सिरियल “सरी ल” निर्माता तथा कलाकार नारायण नेपालले ल्याएको सामाजिक चेतनामूलक हाँस्य सिरियल हो ।निर्माता नेपालले मेरि बस्सै ,हर्के हल्दार ,हाक्का
दिपक ओलिको शब्द संगित रहेको अनि गायिका मेलिना राई र गायक प्रेम राइको स्वर रहेको ‘राम राम तिम्रो कसम ढाटे मरिजाउ’ बोलको गितसंगै भिडियो सार्बजनिक भएको छ । इटहरीको गोकुलम
काठमाडौं, १३ साउन । एक निर्दयी आमाले जन्माएर मकैवारीमा फालेको शिशुलाई प्रहरीले जिवितै उद्दार गरेको छ । बिहीबार बिहान ११ बजेतिर काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिका–८ को ओसिस पार्टी प्यालेस नजिकैको मकैबारीबाट
काठमाडौं, १३ साउन । नेपाल आइडलका विक्रम बरालको ब्यक्तिगत जिवनका बारेमा हामिले त धेरै कुरा सुनेका छौं । विक्रम बरालको त्यतीबेला धेरै चर्चा भयो जतिबेला उनले आफ्नी प्रेमीकालाई सार्वजनिक गरे
काठमाडौं । पछिल्लो समय एउटा पारीवारीक झगडाले निकै चर्चा कमाएको छ । पछिल्लो तीन वर्ष यता श्रीमान श्रीमतीको रुपमा रहेका निर्माता छबीराज ओझा र नायीका शिल्पा पोखरेलबीचको घरयासी झगडाले उग्र
लोकसेवा अगाडी प्रहरीसंग हानाहान, झण्डै गयो ज्यान (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौं, २ साउन । स्थानीय तहमा लोकसेवाले गरेको विज्ञापन समावेशी र समानुपातिक नभएको भन्दै लोक सेवा आयोगको अनामनगरस्थित केन्द्रीय कार्यालय अगाडि बिहीबार बिहान प्रदर्शन भएको छ । प्रदर्शनमा प्रहरी हस्तक्षेप
महिला अधिकारवादी सर्जुको साथ छबीलाई : ‘शिल्पा ! ५२ बर्षे बुढोसंग किन गयौ विवाह ? रेखा थापाले तिमीलाई मुद्दा हाल्नुपर्छ’ (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौं । निर्माता छबिराज ओझा र शिल्पा पोखरेलका बारेमा केही महिला अधिकारकर्मी पनि शिल्पाको विरुद्धमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले अहिले आएर शिल्पाले भिडियो अन्तरवार्तामा रेखा थापालाई गलत देखाएको भन्दै विरोध
शिल्पा र छबीको सम्बन्धमा जब केकीले मारिन् इन्ट्रि (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौं । अभिनेत्री शिल्पा पोखरेलले श्रीमान छबी ओझाबाटै असुरक्षा भएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिएकी छन् । चलचित्र निर्माता छबी ओझा र अभिनेत्री शिल्पा पोखरेलबीच पछिल्लो समय खटपट भएको थियो ।गएको
अन्तरवार्ताभरी रोकीएन शिल्पाको आँशु: ‘मेरो पीडा कसैले सुनेन’ (भिडियो हेर्नुस्)